Izinsiza kusebenza Zasendlini - I-Ningbo Sellers Union Imp & Exp Co., Ltd.
Isisetshenziswa Sokuqina Kwasekhaya Isitolo esidayisa yonke impahla
Ngenxa ye-COVID-19, ukuya ezindaweni zomphakathi zokuzilolonga kusengcupheni enkulu. Abantu abaningi bavame ukusebenzisa ikhaya labo njengesikhungo sokuzivocavoca, kanti nesidingo semishini yokuzivocavoca ekhaya siyakhula. Ngabe ufuna ukwenza imishini yokuzilolonga enenzuzo enkulu kusuka eChina? Njengenkampani Enkulu Yokuhlwaya Ye-Yiwu, sinokusebenzisana okuzinzile nezimboni ezingaphezu kuka-10,000 eziqinisekisiwe.
Soporte para flexiones & Donsa i-Chin up Bar
Amabhendi Wokumelana Nentambo Ye-Jump enesisindo
Thola i-Professional Agent
Ukubhoboza Isikhwama & Amagilavu ​​& Isithuthuthu Esishukumisayo
Ezemidlalo Amahedfoni & Mini Stepper & Pedometer
Ibhayisikili Elimile & Ama-Ellipticals & Ibhentshi Lokuzivocavoca
I-Treadmill & Rowers & Balance Ball ne-Wrist Ball
Uma ufuna ukubuka imishini yokuzivocavoca yenoveli eyengeziwe, sicela uxhumane nathi futhi sizokucaphuna ngokushesha okukhulu.
Ngokungeziwe ezintweni zokuzivocavoca umzimba, singakusiza nokuthola ezinye izimpahla zabathengi, ezifana nemikhiqizo yasendlini, amathoyizi, izinto ze-elekthronikhi, imikhiqizo yengadi, izinto ezifuywayo, imikhiqizo yezobuhle, njll.
Sigxila enanini elikhulu lezimpahla zabathengi, ngokuvamile ubuncane Isamba se-oda singama-dollar ayi-10 000 aseMelika futhi sisekela imikhiqizo exubile.